Fanohanana ny tantsaha : Vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaFanohanana ny tantsaha : Vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana
15/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Saika tantsaha, mpamboly sy mpiompy, ny ankamaroan’ny Malagasy. Noho izay indrindra, nanambara ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateny nataony tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ôfisialy ny Foara Iraisam-pirenena eo amin’ny Fambolena omaly, fa raha miresaka ny tontolon’ny fambolena, tafiditra amin’izany koa ny fiompiana, ny ala ary ny jono. “Hanome lanja ny sehatry ny fambolena ny Fitondram-panjakana satria ny vahoaka malagasy miaina ao anatin’izany avokoa, ary ny fampandrosoana rehetra izay hoentin’ny Fanjakana dia ho an’ireo maro an’isa”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Notsindrinan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa ny fambolena sy ny fiompiana no tena fototry ny fampandrosoana ny firenena. Noho izay indrindra, nilaza ny tenany fa anisan’ny vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana ny fanosehana ny tantsaha mpamokatra, na mpamboly izany na mpiompy. “Rariny loatra raha manosika sy miaraka amin’ireo tantsaha ny Filoham-pirenena. Ireo tantsaha no fototra izay hitondra fampandrosoana ho an’ity firenena ity”, hoy ny Filoha.
Nambarany ihany koa fa ady amin’ny fahantrana no atrehina eto amin’ny firenena. Raha hiady amin’ny fahantrana anefa, hoy hatrany ny Filoha, dia mitodika avy hatrany amin’ny vahoaka maro an’isa, ary miasa ao anatin’izany sehatra izany indrindra ny Fitondram-panjakana satria nijanona tao anatin’ny fahantrana tanteraka ny seha-pihariana eo amin’ny fambolena sy fiompiana hatramin’izao. Noho izay indrindra, nanamafy ny Filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy mitondra fampandrosoana fototra ao anatin’ireo sehatra ireo ny Fitondram-panjakana satria ny taha-pamokarana rahateo dia tsy manaraka ary tsy maharaka ny fitombon’ny mponina. Anisan’izany, hoy hatrany izy, ny fametrahana fotodrafitrasa, ny fitondrana masomboly mifanaraka amin’ny toe-tany sy ny fiovaovan’ny toetry ny andro, sns. Eo ihany koa ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, izay anisan’ny laharam-pahamehan’ny Fanjakana.
Lohalaharana ny tantsaha
Ankoatra izay, notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsy maintsy lohalaharana amin’ny fanohanana ny tantsaha mpamokatra. Noho izay indrindra, nitondra fanazavana mahakasika ny fananan-tany ny Filoha. Nambarany tamin’izany fa tsy misy Fitondram-panjakana mamarotra tany amin’ny vahiny izany mihitsy. “Tsy misy mihitsy ny famarotan’ny Fitondrana tany amin’ny vahiny izany. Ny tantsaha no lohalaharana amin’ny tany eto Madagasikara. Izay indrindra no nahatonga ny Fanjakana nizara kara-tany ho an’ireo tantsaha manerana ireo faritra maro eto Madagasikara”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Etsy andaniny, nambarany hatrany fa anisan’ny fanampiana ireo tantsaha mpamokatra avokoa izany fizarana kara-tany izany. “Tsy maintsy hampiana ireo tantsaha ka ny voalohany amin’izany ny fanamboarana ny fananan-tany. Io no imatimatesantsika hatramin’izay. Izany rahateo no hoenti-mampandroso ny seha-pamokarana. Rehefa mandroso ny seha-pamokarana eto amintsika, mivelatra ho azy eo amin’ny sehatry ny tsena sy ny varotra i Madagasikara manoloana ireo firenena sy fikambanana marobe, toa ny Sadc, aty Afrika sy ny Oseana Indianina, ary maneran-tany mihitsy aza. Ny foto-kevitra mibaiko antsika dia mitondra ny fambolena sy ny fiompiana eo amin’ny sehatra avo kokoa eo amin’ny tsena. Tsy maintsy mitodika amin’ny tsena ny seha-pamokarana. Efa maro mantsy ny sehatra mivelatra manoloana antsika amin’izao fotoana izao, na dia ny tsena anatiny fotsiny aza”, hoy hatrany izy.”, hoy ny Filoham-pirenena.
Nambarany fa anisan’ny asa efa natomboky ny Fitondram-panjakana hoenti-mampandroso ny fametrahana fotodrafitrasa maro, toa ny toho-drano lehibe, ny lalana, ny famatsiana rano sy herinaratra, sns. Izany rehetra izany, hoy hatrany izy, anjara andraikitry ny Fitondram-panjakana avokoa hoenti-manampy ny tantsaha sy ny vahoaka maro an’isa.
Nilaza ny Filoha fa ireo sehatra tsy vitan’ny tantsaha, ny Fanjakana no hanatanteraka azy hoenti-manosika sy manohana hatrany azy ireo.
Ankoatra izay, nambaran’ny Filoha fa mila manova toe-tsaina ihany koa ny tantsaha mba hanaraka ny fivoarana eo amin’ny tontolon’ny fambolena sy ny fiompiana. Izany indrindra, hoy izy, no tsy maintsy hitondrana fanovana ahafahana manodina ireo vokatra. Nambarany fa izany ihany koa no hampitombo ny fari-piainan’ireo tantsaha, ary tsy maintsy hirosoana izany. “Ny Fitondram-panjakana dia ao an-damosin’ny tantsaha ary mitari-dalana azy ireo mandrakariva. Manosika ny tantsaha eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny fanamby napetraky ny Fanjakana. Mila mifanolo-tanana ihany koa mba ahafaha-mampandroso, ary efa eo ireo mpiara-miombon’antoka sy mpamatsy vola hanampy antsika amin’izany”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teny am-pamaranana.